२०७५ पौष १९ बिहीबार ११:११:४१ प्रकाशित
पौष १९ सिन्धुली । ३ नं. प्रदेश स्तरीय प्रादेशिक महोत्सव सिन्धुलिमाढिमा शुरु भएसङ्गै महोत्सव स्थलदेखी टाढाटाढाको स्थान, समुदायबाट महोत्सब हेर्न आउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । रेडियो टेलिभिजनमा देख्दै सुन्दै आइरहेका कलाकार महोत्सवमा आउने भएपछी र आफ्नो मनपर्ने कलाकारको प्रस्तुती लाइभ हेर्न पाउने भएपछी स्थानियमा खुशी छाएको पाइन्छ ।
गोलन्जोर गाउपालिका -५ कि शर्मिला गोलेलाइ पनि महोत्सब हेर्न जाने ठूलो रहर थियो । प्रायजसो घरायसी कामले फुर्सद नहुने शर्मिला गोलेलाई मंगलबार महोत्सवमा शिव परियार आउने कुराले महोत्सव हेर्न जाने इच्छाशक्तिले एकाएक मनमा डेरा जमायो ।
घरको सम्पुर्ण धन्दा, बस्तुभाउ अनि मजदुरी यी सबै कुराले लामा सजिलै घरबाट उम्किने सक्ने अबस्थामा थिइनन । एकदिनको फुर्सद निकालेर लामा उनको १४ बर्षिया छोरोलाई साथमा लिएर मंगलबार बिहानै महोत्सव हेर्न सदरमुकाम हिडिन ।
हिडेर जाने सम्भावना नभएको र सदरमुकामसम्म जाने गाडी बिहान एकपटक मात्रै छुट्ने हुनाले लामालाई बिहानै घरबाट निस्किन बाध्यता जस्तै भयो । उनी छोराको साथमा डबलक्याप बोलेरोको पछाडी बसेर महोत्सव स्थलमा १०:५५ बजे पुगिन । महोत्सव स्थलको नजिकै कला होटलमा लामा र उनको छोराले खाना खाए र महोत्सव स्थलतिर लागे । रु. १०० मा दुइओटा टिकट काटिसकेपछी गोले र उनको छोराले महोत्सबस्थलमा प्रबेश पाए ।
महोत्सव स्थल प्रवेशसङ्गै गोलेले छोराको पिङखेल्ने इच्छाशक्तिलाई मार्न सकिनन । २०० रुपैया तिरेर दुइवटा टिकट काटी गोलेको आमाछोरा पिङ्ग खेल्न गए । पिङखेल्न शुरु गरेसङ्गै पिङमा घुम्दै माथी पुगेपछी छोराले नजिकै ठूलो आवाजमा काठको भित्तामा मोटरसाइकल र गाडी कुदिरहेको देख्यो । १० फन्को जति लगाएपछी पिङ रोकियो । पिङबाट हतार हतार ओर्लिएर उनको छोरोले आफ्नी आमालाइ दोहोर्याउदै भित्तामा कुदिरहेको मोटरसाइकल र गाडी भएतिर लग्यो ।
महङ्गो शुल्क तिरेर मौतकाकुवा हेर्न छिरेका गोलेका आमाछोरालाई कतिबेला उनको मनपर्ने कलाकार शिव परियारलाई हेर्न र गित सुन्न पाइन्छ भन्ने थियो । पिङ अनि खेल सबै घुमेर मन्चको अगाडी गोलेका आमाछोरा करिब २ बज्न लाग्दा पुगे । विभिन्न प्रस्तुतिहरु प्रस्तुत भइरहेको महोत्सवमा ख्यातिप्राप्त कलाकार शिव परियारको अबको केही समयमा आगमन हुँदैछ भन्ने उद्घोषकको प्रस्तुतिले गोलेका आमाछोराको मात्रै हैन त्यहा उपस्थित सबैको ध्यान केन्द्रित भैरहेको थियो ।
उछृङ्खल नृत्य अनि अपच्य शब्दमा बढी समय खर्चिरहेको उद्घोषकले शिव परियार आइसक्नु भयो एकैछिनमा उहाको प्रस्तुति राख्छु भनेको करिब ३ घण्टा बितिसक्दा पनि गाएक शिव परियारलाइ स्टेजमा नदेख्नुले गोलेका आमाछोरालाइ मात्रै हैन उपस्थित दर्शकको पनि मन दुखिरहेको थियो । शिव परियारलाइ नै हेर्न र उनको लाइभ गित सुन्न एकदिन माया मारेर तिन घन्टालगाइ गाडिमा सदरमुकाम झरेकी गोलेकि आमाछोराको मनमा गाडी छुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता उस्तै थियो ।
करिब ६ बज्न लाग्दा समेत स्टेजमा शिव परियार नदेखिए पछि शर्मिला गोलेलाइ लाग्यो उद्घोषकले झुक्यायो । उनले महोत्सव स्थलबाटै आफू बिहान आएको सवारी चालकलाइ फोन गरि । चालकले आफू बजारबाट हिडिसकेको र शान्तिनगर चोकमा सामान हाल्दै गरेको बताएपछी गाडी छुट्ने चिन्ताले हतारहतार गोलेका आमाछोरा महोत्सवस्थलबाट बाहिरिए ।
शिव परियारको गित सुन्न र प्रत्यक्ष हेर्न तीन घन्टाको बाटो हिडेर महोत्सवमा आएकी गोले र उनको छोराको इच्छालाई उद्घोषकले ब्यर्थ साबित गरिदियो ।
कनपा -४ कि मुना आचार्यले समेत दिउसो राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति नराखिदा राती रक्सी खाएर हल्ला गर्नेगरि महोत्सव स्थलमा आउनेले अनेकन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाइन । रक्सिको बोतल स्टेजमा राखी गैह्रकानुनी रुपले प्रचार गरिदा रक्सी खाएर हल्ला गर्नेको मनोबल बढेको भन्दै आयोजकले यसप्रती चासो नदेखाएकोमा उनको दुखेसो छ ।
विभिन्न नाम चलेका कलाकारको प्रस्तुती भनेर प्रचार गरिन्छ, टाढा- टाढाबाट आउने जिल्लाबासिले कलाकारको प्रस्तुती हेर्न र सुन्नकै लागी भनेर टिकट काट्छन तर जब उनिहरु घर फर्किने बेला हुन्छ, रात पर्छ तब मात्रै कलाकारलाइ स्टेजमा बोलाइदा दर्शकको मन खिन्न हुने गरेको कनपा -७ कि कमला रोक्काको बुझाइ छ । रोक्का भन्छिन -'गाउका नागरिकको पैशा लिएर बजारबासिले रमाइलो गर्छन । '
टाढा-टाढाबाट आउने दर्शकलाइ फर्किने हतार हुन्छ । घरब्यबहार सबैबाट फुर्सद निकालेर महोत्सव हेर्न आएका हुन्छन तर कलाकारको प्रस्तुती हुने बेला सधै रात पर्नेहुदा समस्या भएको महोत्सब हेर्न आउने दर्शकको गुनासो छ । स्थानिय कनपा -४ कि रेणु देभकोटाले भनिन - 'पैशा तिरेर महोत्सव हेर्ने भनेकै गाउका सोझासिधा नागरिकले हो । बजारबासिले त २०० तिरेर स्थानिय पास बनाएका छन जतिबेला नि छिर्न सक्छन ।' स्थानिय पास, प्रबर्धक पास, प्रेसपास लगाएतको नाममा धेरैले महोत्सवमा निशुल्क प्रवेश पाउने हुदा पहुचवालाको मात्रै महोत्सवमा हावी भएको देबकोटाले बताइन ।
राती कलाकारको प्रस्तुती राखिनुको उदेश्य के हो रु भनी सोधिएको प्रश्नमा आयोजक उद्योग बाणिज्य संघ सिन्धुलिका अध्यक्ष अमरेशचन्द्र बैदारले भने -'कलाकारको दिउसो समय नै मिल्दैन ।' काठमाडौ तथा अन्य ठाउबाट कलाकार आउनुपर्दा समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । '
अध्यक्ष बैदारका अनुसार यस प्रादेशिक महोत्सवमा करिब साढे सात हजार प्रबेसपास बितरण भएको छ । करिब ३७ सय स्थानिय पास बितरण गरेको महोत्सवले स्थानिय राजनितिक दल, कलाकार, कार्यसमिति सदस्य, पत्रकार लगाएतलाइ निशुल्क पास बितरण गरेको छ ।